Forex Broker Rebates - Best Forex EA si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeForex Broker Rebates
Ego Rere Ego Ego Forex Forex - Nweta Ongwọ Maka Azụmaahịa ọ bụla Make Na-eme
Ị na-na a mmelataego maka ọ bụla ahia ị na-eme?
Ọ bụrụ na ị bụghị, mgbe ahụ, ị ​​na-atụba ego si na windo.
Ego azụ Forex Broker Rebates
Ọ na-arụ ọrụ dị ka nke a:
Ndị ahịa ahia ochie na-akwụ gị ụgwọ site na-atụle ọdịiche dị n'etiti ego ahụ ma rịọ ego (a maara dịka "gbasaa"). Otú ọ dị, ị nwere ike, ọfụma, gbasaa mgbasa ahụ n'ụzọ dị irè site n'inwe ego nkwụghachi maka ọ bụla ị na-eme. N'ezie, ị nwere ike nweta nkwụghachi ndị a site na mepee akaụntụ forex site na onye na-ewebata onye na-ere ahịa (nke a na-ezo aka na ụlọ ọrụ dịka "IB").
Ihe IB nwere nkwekorita ya na onye ahia ahia ahia izisa oru onye ahia ahia ya ma nye ndi ahia ntukwasiri ya obi. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ga-emepee akaụntụ na onye na-ere ahịa site na IB, onye na-ere ahịa na-enye ego ego echekwabara IB ahụ maka ọtụtụ ahịa onye ahịa ahụ zụrụ. Imirikiti IB na-echekwa ọrụ ahụ maka onwe ha. Onwere, odi ihe ufodu IB nke na enye ndi ahia ihe aka ha ka enyeghachi ego ahu.
Ego azụ azụ Forex Broker Rebsates Uru
Ọtụtụ n'ime ndị a na-enye nkwụghachi IB nwere mmekọrịta na otu onye na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ole na ole. Nke a pụtara na ị ga-enwe oke oke na nhọrọ nke onye na-ere ahịa. Iji maa atụ, inwere ike imeghe akaụntụ Broker A ma ọ bụ Broker B, mana ọ bụrụ na iweghachi nkwụghachi IB enweghị mmekọrịta ọ bụla na ha, ị gwụla n'ọchichiri.
Otú ọ dị, anyị oke maka a mmelataego-enye IB, CashBackForex, Nwere mmekọrịta na n'elu iri atọ agbanwe. Ebe a bụ ndepụta nke ya Forex agbanwe na rebates na nkọwa ndị ọzọ:
Ọ bụrụ na ị na-atụle ịmepe akaụntụ akaụntụ, ị nwere ike ịmeghee ihe site na IB CashBackForex na-enweta rebates kwa ọnwa. The na-agbasa ga-anọgide na-ahụ dị ka ma ọ bụrụ na ị na-emeghe otu akaụntụ kpọmkwem otu n'ime ndị a agbanwe.
N'ozuzu, ya a mmeri-mmeri ọnọdụ ị na IB.
Ị na-ugbu a eleghị anya na-arịọ: Gịnị na-bụghị onye ọ bụla na-eme nke a? Gịnị mere na onye ọ bụla na-emeghe otu akaụntụ kpọmkwem otu n'ime ndị a agbanwe kama na-aga site a mmelataego-enye IB?
O nwere ike ịza: Ọtụtụ ndị amaghị ihe gbasara ya. Dika onweghi ihe onodu anoghi na ulo ahia ma gha eme ihe ndi a, nkea puru inye aka na ndi mmadu kariri ịma ihe banyere IB na amuma iweghachi ego.
Gị trading ịga nke ọma,